VanoRojesa Dzimba kuVictoria Falls Voda Kubhadharwa neMadhora ekuAmerica
Izvi zvinonzi zvave kunyanya kuomera vashandi vehurumende muguta iri, zvikuru sei masoja nemapurisa avo vanonzi vamwe vavo vave kugara mumatende pahofisi yemapurisa mushure mekudzingwa mudzimba dzavairoja pamusoro pekutadza kubhadhara nemari yekunze.
Vakuru vemapurisa varamba kuti pane masoja nemapurisa arikugara mumatende pamahofisi avo, vachiti titaure nevakuru vavo kuHarare.
Kanzura veWard 6 muVictoria Falls, VaEphias Mambume veMDC Alliance, vaudza Studio 7 kuti sezvo pamahofisi emapurisa pachigara paine matende, havasikuziva kuti ichokwadi here kuti mamwe mapurisa nemasoja vave kutogara mumatende aya pamahofisi yemapurisa.
VaMambume vati nyaya iyi haisi yezvematongerwo enyika asi yezvemihoro yevanhu vanoshandira hurumende vasingapiwe mari inokwana kuriritira mhuri dzavo.
Asi munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko VaNick Mangwana vanoti handi chokwadi kuti mapurisa ari kugara mumatende nekushaya pekugara. Vanoti matende akaiswa nekuti pane basa ravari kuita pakamba apa.
Hurukuro naVaEphias Mambume